Ziphumulele e-Sauna e-Suite ene-River Views
I-ikhaya eliyindawo yokuhlala ephelele ibungazwe ngu-Jenae
Gqoka nge-kimono, phuza inkomishi yetiye, futhi uphuze ngokubuka okumangalisayo kwe-Columbia River Basin. Ngena kubhavu we-ocher, i-claw-foot ukuze uthole ukucwiliswa okunethezeka ngemikhiqizo yokugeza eyenziwe ngezandla, bese uzisonga esihlalweni esimpunga esithokomele phansi kumabhodi okuhlola aphuzi.
I-CatBird Seat iyindawo yangasese, esesitezi sesibili yekhaya elihle lenkathi yama-Victorian ka-1890. Izivakashi zethu zinekhishi lazo, indawo yokudlela, igumbi lokuhlala elinombono woMfula i-Columbia, indawo ye-sauna nendawo yokugezela. Sihlinzeka izivakashi zethu ngethreyi le-charcuterie elimnandi kanye ne-Fort George Beer. Isivakashi siphinde sibe nokufinyelela endaweni yokuwasha okwabelwana ngayo ezingeni elincane uma sicelwa.
4.89(154 okushiwo abanye)
4.89 · 154 okushiwo abanye
Sesha i-CATBIRD SEAT ASTORIA ukuze uthole iwebhusayithi ye-Catbirds Seat yesevisi yethu ye-concierge yangakini. Izindawo zokudlela, Izinkampani Zotshwala, Izinqola Zokudla, Amamnyuziyamu, Amagalari kanye Nezindawo Zokukhushulwa Kwensangu eziqhelelene nje nale ndawo yokuhlala yasekhaya yedolobha.
Umgcini wendlu yezihambi, uJenae, uhlala esitezi sokuqala saleli khaya. Izihambeli zabelana ngomnyango omkhulu wendlu nosokhaya. Ifulethi lesitezi sokuqala linomnyango walo wangasese ngemva nje kokungena, futhi izihambeli zine-suite yesitezi sesibili zizodwa. Izivakashi zikhululekile ukuthumela umbhalo/ukushayela u-Jenae kumakhalekhukhwini wakhe, azohlinzekwa, uma kukhona akudingayo.
Umgcini wendlu yezihambi, uJenae, uhlala esitezi sokuqala saleli khaya. Izihambeli zabelana ngomnyango omkhulu wendlu nosokhaya. Ifulethi lesitezi sokuqala linomnyango walo wangase…
UJenae Ungumbungazi ovelele